မန္တ​လေး မုန့်​တီ ဘဝပျက်​သွားခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မန္တ​လေး မုန့်​တီ ဘဝပျက်​သွားခြင်း
မန္တ​လေး မုန့်​တီ ဘဝပျက်​သွားခြင်း
Posted by မောင်ရိုး on Nov 13, 2013 in Creative Writing | 43 comments
## မန်း​လေးမုန့်​တီ ဘဝပျက်​သွားခြင်း###
မန္တ​လေး လို့ဆိုလိုက်​တာနဲ့ ကျ​နော်​စိတ်​ကြည်​နူးမိပါတယ်​ ။ ဘာ​ကြောင့်​ရယ်​မသိ ကျ​နော်​ မန်း​လေးကိုချစ်​တယ်​ .. ။ အင်း.. ချစ်​စရာ​တွေလည်းရှိခဲ့တာကိုး…. (​ပြောမပြဘူး )
တဆက်​တည်းမှာပဲ မန်း​လေးက အစားအစာ​တွေဆိုသိပ်​ကြိုက်​တာ​ပေါ့ဗျာ ။ ငယ်​ငယ်​တုန်းကစားခဲ့ဖူးတဲ့ စိန်​ပန်းထဲက အဖွားကြီး​ရောင်းတဲ့မုန့်​တီဆိုရင်​ အခုချိန်​ထိ အိမ်​မက်​ထဲမှာစွဲ​နေမိတာ ..။
တရုပ်​တန်း​ည​ဈေးတန်းမှာစားခဲ့ရတဲ့ ပန်း​သေး​ခေါက်​ဆွဲ ၊ ဘုံ​ကျောင်းဝန်းထဲမှာ​ရောင်းတဲ့ ယူနန်​​ပေါက်​စီ ..အခုချိန်​ပြန်​ရှာရင်​​တော့ ဟိုးးး…အ​ဝေးကြီးမှာ​ပေါ့ဗျာ …။
ဘယ်​ဆိုင်​မှာ ဝင်​စားစား စားလို့​ကောင်း​နေတာက​တော့ ဘယ်​​ဒေသမှာနဲ့မှအရသာမတူတဲ့ မုန့်​တီ ပါ ..။ ဟုတ်​ပါတယ်​ .. မန္တ​လေး မုန့်​တီကို ကျ​တော်​တို့က နန်းကြီးသုပ်​လို့​ခေါ်ကြ​ပေမယ့်​ ​ရွှေမန်းသူားများက​တော့ မုန့်​တီ လို့ဘဲ​ခေါ်ပါတယ်​ ။
ပွဲပြင်ပြီးစ မနယ်ရသေးခင် ပုံ
နယ်ပြီး စာဖို့ အဆင်သင့်ပုံ
မုန်​တီမှမစားခဲ့ရင်​ မန်း​လေးကိုမ​ရောက်​ခဲ့သလို… မုန့်​တီစစ်​စစ်​ အရသာကလည်း မန်း​လေးမှာပဲ ရှိတာပါ ။ ယခင်​က ရန်​ကုန်​မှာ နန်းကြီးသုပ်​ဆိုင်​​တွေဘယ်​လို့ပဲ​ရောင်းခဲ့ပါ​စေ .. မန်း​လေးနဲ့​တော့ ထပ်​တူထပ်​မျှခံစားလို့မရခဲ့ပါဘူး ။
လက်​ရာခြင်းမှမတူတာ​လေ… ကျ​နော်​သိသ​လောက်​ မုန့်​တီမှာအဓိက ကပဲမှုန့်​ပါ .. ။ အစဉ်​အဆက်​ မန်း​လေးက ကုလားပဲမှုန်​စစ်​စစ်​ကို ​ပေါင်​ဒါမှုန့်​လို ညက်​​နေ​အောင်​ကြိတ်​ထားလို့ မုန့်​တီထဲ​ရောက်​ရင်​ ဆီထဲမှာ​ပျော်​ဝင်​သွားပါ​ရောလား…
ရန်​ကုန်​မှာ ပဲမှုန့်​အများစုက ကြမ်းရှရှနဲ့ဆို​တော့…. ….
မုန်​ဖတ်​က တခြား ပဲမှုန့်​ကတလွဲ… ဒီကြားထဲ ကြက်​သားကိုဟင်းပုံစံချက်​ထည့်​တာ​လေ..။
မန်း​လေးမုန့်​တီမှာ​တော့ ကြက်​သားဖတ်​ကို ပြုတ်​ပြီးခွါထည့်​ထားတာ …
ဘယ်​လို​ပြော​ပြော ​ရောက်​​လေရာနန်​ကြီးသုပ်​စားတတ်​​ပေမယ့်​ ငယ်​ချစ်​​ဟောင်း မန်း​လေးမုန့်​တီနဲ့​တော့မတူတာအမှန်​ပါပဲ ။
ဒါ​ပေမယ့်​. …. ကျ​နော့်​အတွက်​ ရ​သေ့စိတ်​​ဖြေစရာဆိုင်​တစ်​ဆိုင်​ကို ​တွေ့လိုက်​ရပါတယ်​ ။ လွန်​ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်​​လောက်​ကတည်းကပါ .. အဲဒီတုန်းက ဆရာစံလမ်းမှာပဲ ဖွင့်​​သေးတာ​ပေါ့ …
​သြော်​….သူနံမည်​က “​မောနင်းစတား”တဲ့ …
ဟုတ်​ပါတယ်​ .. မန်း​လေးမှာလည်းနံမည်​ကြီးခဲ့ပါတယ်​ ..
​နောက်​​တော့ ..တရိစ္ဆာန်​ရုံ​ဘေး မှာဆိုင်​ကြီးဖွင့်​လို့ခန့်​ခန့်​ထည်​ထည်​​ပေါ့ ..
ဒီလို .. ဒီလိုနဲ့ ….ဆိုင်​ခွဲ​တွေဖွင့်​လာလိုက်​တာ ​တော်​ဝင်​စင်​တာ ​ပေါ်အထိ​ရောက်​လာပါ​ရောလား…
မန္တ​လေး ​ လို့အသံကြားရင်​ ရင်​ခုန်​တတ်​တဲ့ကျ​နော်​ ……
မုန့်​တီလို့ ဆိုလိုက်​တာနဲ့ သ​ရေယိုမတတ်​ဖြစ်​ရတဲ့ကျ​နော်​ ….
​တော်​ဝင်​စင်​တာ​ပေါ်မှာ ​မောနင်းစတားကို​တွေ့လိုက်​တာနဲ့ ကျ​နော့်​စိတ်​​တွေထိန်းမရခဲ့ ပါကလား.။
မိန့်​ မိန့်​ကြီးထိုင်​ ၊ မုန့်​တီတစ်​ပွဲခတ်​​လော​လောမှာလိုက်​ပါတယ်​ …။
ဓတ်​ပုံမှာ​တွေ့ရတဲ့အတိုင်း မုန့်​ဖတ်​​ပေါ်မှာ ပဲပျစ်​ရည်​​တွေဆမ်းထားတာ…
ကိုရီးယားပဲ​ခေါက်​ဆွဲကို အားများကျ​လေသလား ​မောနင်းစတားရယ်​ …
မန်း​ရင်​ခွင်​က ထွက်​လာတာမကြာ​သေးဘူး မန်း​လေးရဲ့ပုံရိပ်.. မန်းရဲ့ထရိတ်​မတ်​ ပြီး​တော့ ကျ​နော့်​ရဲ့အသဲနှလုံး မုန့်​တီကိုမှ ရက်​ရက်​စက်​စက်​ ….
ကြည့်​ပါဦးဗျာ .. မုန့်​ဖတ်​​ကိုဆီဆမ်း ကြက်​သားဖတ်​ထည့်​ ပဲမှုန့်​ဖြူး ပြီး​တော့ အုန်းနို့​ခေါက်​ဆွဲဟင်းရည်​လိုလိုခတ်​ပျစ်​ပျစ်​ကြီးဆမ်း​ပေးလိုက်​တာ အရသာက​တော့ …
လ​အော့လအယ်​နဲ့ ​ရွှေ​တောင်​​ခေါက်​ဆွဲလည်းမဟုတ်​ …
မုန့်​တီလည်းမဟုတ်​… ​မောနင်းစတားပဲနန်း​ကြီးလို့ပဲ အမည်​တပ်​လိုက်​ချင်​​တော့တယ်​ …။
ခင်​ဗျားရဲ့ နန်းကြီးသုပ်​ကို မန္တ​လေး မုန့်​တီလို့​တော့ ဘယ်​​တော့မှမ​ပြောလိုက်​ပါနဲ့​ဗျာ …
ကျ​နော်​ချစ်​တဲ့ မန်း​လေးကိုယ်​စား ရင်​နာလွန်းလို့ ….
အနော့ကို လွမ်းအောင် ဖန်လေရော့သလား ဆာဆာရယ်။
အစားအသောက်ဆိုတာတော့ ဆန်းသစ်ရတယ် ဆိုတာမှန်ပေမဲ့ ပြင်လွန်းသွားရင်
စိတ်မှာ စွဲနေတဲ့ အတိတ်အရိပ်လေးတွေ ပျောက်သွားတာပေါ့။
အဲဒီ အခါမှာ တို့တုန်းက မန်းလေး နဲ့ မတူတော့ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။
ဘာပဲပြောပြော ကိုယ့်မန်းလေးကို ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ လူဂျီးတစ်ယောက်ကို ပိုချစ်သွားသလိုပါပဲလေ၊
ပထမဆုံး အား​ပေးသွားတာ​ကျေး​ကျေး ဗျာ
အဲဒိ ဆိုင်​တစ်​ဆိုင်​တည်း ထွင်​တာထင်​ပါရဲ့ဗျာ..
တရိစ္ဆာန်​ရုံ​ဘေးကဆိုင်​က​တော့ မူလဘူတ ပါပဲ…
မန်လေးဂ ငယ်ဘွ ဇာတ်လမ်းလေးဂို တိဂျင်ဒယ် ….
မန်းလေးဂို ချစ်တယ်ဆိုတော့ကာ …
မန်းလေးက ဖေဂျီးပေါက်၊ ဥခင်ခ၊ ကပေ၊ ဘဲဥ၊ ဖြဲမ စဒါ စဒါတွေဂိုရော …
ဂျစ်တယ် ဆိုဒဲ့ ဘောပေါ့နော် …
မန်းလေး မုန့်တီတော့ စားဖူးဘူး …
တားဂ နန်းဂျီးသုပ် စားဒတ်ဘူးရယ် … ဟီးးး
ငယ်​ဘွ ? မ​ပြောဘူး .. သတ်​ချင်​သတ်​ပလိုက်​
​ပြောပြီးပါပ​ကော..မန္တ​လေး လို့ဆိုတိုင်း ​မေတ္တာ သက်​ဝင်​ချစ်​ခင်​တာ​ပေါ့ …
သက်​ရှိရွာသူား​တွေကို ဘယ်​​လောက်​​လေး​လေးနက်​နက်​ ခင်​မင်​မလဲဆိုတာ….
ကျနော်ကတော့ ကသာဆိပ်ကမ်းမှာ စားခဲ့ရတဲ့
မိုးတား မုန့်တီကို လွမ်းပါသည် ၊
ပဒဲကောမှုန့်လေးနဲ့ မွှေး လို့ ၊
သြော် ရွှေကူကို မန်းကနေ ကားနဲ့ချည်းသွားနေတော့
ကသာမရောက်တာ ကြာ ပေါ့လေ ၊
မိုးတား(မိုးဒါး) ကိုကြားဖူး​ပေမယ့်​ တခါမှ​တော့မစားဘူးပါဗျာ…
ကျုပ်ကလည်း ငယ်ငယ်ကနေ ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အထိ မန်းလေးနေလာတာ
မန်းလေးသားလိုပါပဲ..နေခဲ့ရသမျှ မြို့တွေထဲ မန်းလေးမှာအပျော်ဆုံးပဲ….
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် မန်းလေးကိုသွားလယ်တော့ …နန်းတွင်းမှာ မန်းလေးမုန့်တီ စားခဲ့ကြသေးတယ်..
အမှတ်တယပေါ့…ရန်ကုန်မှာတော့ မန်းလေးမုန့်တီ ၀ယ်မစားဖြစ်သေးဘူး..မကြုံလို့…
ဒီနှစ်လည်း ထပ်သွားဖို့ ကြိုးစားအုံးမယ် ကိုဆာမိရေ….
ကျ​နော်​က​တော့ ဦးမိုက်​​လောက်​ကြာကြာမ​နေဖူးပါဘူး ..
လ အနည်းငယ်​​လောက်​ပဲ ​နေဖြစ်​ခဲ့တာ..
တခါတ​လေ မန်း​လေး​တောင်​အားကစားကွင်း(အခုရှိ​သေးရဲ့လားမသိ) ​ရှေ့က အုတ်​တံတားမှာ ညည ဂစ်​တာတီးခဲ့ဖူးတဲ့​နွေည​တွေကို​တော့ဖြင့်​ လွမ်းမိသား…..
အာသာ​ပြေ မန်းမုန့်​တီနဲ့မြီးရှည်​ကို စားကြည့်​ချင်​ရင်​​တော့ ​အလုံ​အောက်​ကြည့်​မြင်​တိုင်​လမ်း​ပေါ်မှာ ဖွင့်​ထားပါရဲ့ဗျာ ..
ယခင်​က ​ငွေစင်​​ယော်​နာမည်​နဲ့ ဟဲလ်​ပင်​မှာ​ရောင်းခဲ့တာ​ပေါ့ ..
တရိစ္ဆာန်​ရုံ​ဘေးကဆိုင်​ကလဲ အဲလိုတော့မဆိုးပေမဲ့ ဘယ်လိုမှစားမရလို့ ဘယ်လိုဂျီးမှန်းမသိလို့ တပွဲတောင် ကုန်အောင်မစားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကားပွဲစားတန်းနားကရွှေပုလင်ကတော့ နဲနဲလေးမဆိုးဘူးလားလို့။ စားလို့ရတယ်ပြောပါတော့။
ဧည့်သည်ကို ဧည့်ခံကာ စားပေးမယ်၊
တစ်ရက် တစ်ဆိုင် ပေါ့ဗျာ။
ဗျို့… ဦးခ …
တစ်ရက်တစ်ဆိုင်လိုက်ကျွေးမယ့်သူရယ်၊ အဖော်လိုက်ြပီးဧည့်ခံမယ့်သူရယ်တော့ တွေ့ပြီ။
ကိုပေါက်ရေ နိုဝင်ဘာလကုန်လာဖြစ်မယ်။ ကိုခင်ခလည်းတွေ့ချင်ပါတယ်။
တကယ်​ကို လာဖို့ရှိပါတယ်​ဗျာ …
အစ်​ကိုတို့နဲ့ လည်းဆုံချင်​သလို မ​ရောက်​တာကြာလို့ အလည်​အပတ်​လည်းပါသ​ပေါ့ …
ဒါနဲ့ ..အစ်​ကိုလာရင်​လည်း ​ပြောပါဦး​နော…
လူလူချင်းမဆုံရ​သေး​ပေမယ့် ​ စာတစ်​ပုဒ်​အတူတူ​ရေးဖြစ်​ခဲ့တာ​လေးက​တော့ တသက်​စာအမှတ်​တရပါဗျာ ။
​နောက်​တခါ ​ရေးဖြစ်​ဖို့လည်းကြိုးစားပါဦးမယ်​​နော ..
မုန့်ပန်းကန်ကျိလိုက်တော့ မန်းလေးမုန့်တီမှာ မုန့်ဟင်းရည်တွေဆမ်းထားသလားလို့ ဆိုးလိုက်တာ :buu:
​ဒေါ်​ဒေါ် Wow ​ရေ
ဒါ​ကြောင့်​ .. ဘဝပျက်​သွားတယ်​လို့ ​ပြောတာ​ပေါ့ ..
မန်းလေးအကြောင်းရေးကြတော့ လွမ်းမိပါသဗျာ …
လ္ဘက်ရည်ဆိုင် ရှေ့မှာ ဘယ်မြို့မှာမှ မတွေ့ဖူးမိတဲ့ ဆိုင်ကယ်လေးတွေ စနစ်တကျ တန်းစီလို့
တည်းတော့ မိန်းထဲမှာ ဆောင်းတွင်းမို့ ချမ်းလိုက်တာ တုန်လို့
ပြီးတော့ ကိုရင်ဆာမိပြောတဲ့ မန်းလေးမုန့်တီကိုလဲ လွမ်းရပါသဗျာ ။
မိန်းမ ကယ်ပါ….. အဲ……
မန်းသူလွမ်းရဖို့ အရေးကို ဖယ်ထား
အိပ်ရှင်မက အနားနား တစ်ကောက်ကောက် ပါနေတာမို့ စွေစောင်းလေးတောင် ဟိုဒင်း လုပ်ခဲ့ရပါဘူး … ဟီး
မနက်စာ အဖြစ် စားခဲ့သပေါ့
နီးနီးနားနား စိန်ပန်းက ဒေါ်ရင်မုန့်တီပဲဗျာ…….
ပြောရင်းဆိုရင်း ဗိုက်တောင် ဆာလာသလိုလို……..
​ပြောဖို့​မေ့​နေတာ.. ​ဈေးချို​တော်​က ခနုံထုပ်​​လေးလည်းသတိယသား …
ခနုံထုပ်က ယိုးဒယားက လာတယ်ဆိုလား……….
ဤရွာထဲတွင် ခနုံထုပ် ကျွမ်းကျင်ရှိပါသည်။
အားတေးဘူး ခလေးထိန်းနေရလို့တဲ့ အာတီဒုံရေ
အနော်ကတော့ မုန့်တီဆို ရခိုင်မုန့်တီဘဲကြိုက်တယ်ဗျာ …. စာရိုက်ရင်း သွားတွေချဉ်ပီးလာတယ် .. ဂလု
မန်းလေးရောက်ဖြစ်ရင်တော့ မုန့်တီနဲ့ ခိုတောင်မုန့်တီကို သိပ်မစားဖြစ်ဘူး …
ကျနော်ကြိုက်တာက ကြာဇံကြော်နဲ့ ငါးအရေခွံကြော် ပြီးတော့ ဆန်ချိုအေး ..
ဟဲဟဲ … ၀က်သားဒုတ်ထိုးကတော့ မပါမဖြစ်ပေါ့ ….
၁၆ကျောင်းထောင့်က မြင့်လွင်ဒုတ်ထိုးကတော့ စားနေကျ
ပြောရင်းပြောရင်း သရည်ယိုလာပီ ….. ဒါဗြဲ
ရခိုင်​မုန့်​တီဆိုရင်​​တော့ ဧကန္တ မင်းလမ်း​ဆိုင်​စား​နေကြထင်​ပါ့ …
ထွင်ချင်လဲ ထွင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ နာမည် ပြောင်းပြီး ထွင်ပေါ့ နော။
ပုံကို စကြည့်ရတော့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ မှတ်နေတာ။
အဲလာ မုန့်တီ မဟုတ်မှန်း ကျွန်မတောင်သိတယ်။
သူများထက်​ထူးပြီးနှဖူး​ပေါ် ​ခြေ​ထောက်​​ပေါက်​ ဆိုလား….
၉တန်းအောင်တော့ နွေရာသီ မန်းလေး တက္ကသိုလ် လေ့ကျင့်ရေးတပ်ထဲ ၁လလောက် နေခဲ့ဖူးတယ်။
မန်းလေးက အုန်းသီးခြစ်ပါတဲ့ ဖွာလူဒါ ကြိုက်တယ်။
ကျန်တာတော့ လာလည်ရင် ကြွေးတာလိုက်စားဖို့ မှတ်သွားမယ်။
စပွန်​ဆာရှိရင်​​တော့ မန်းကိုတစ်​​ခေါက်​​လောက်​သွားချင်​သားဗျ ..
ကိုပေါက်ရေးထားပြီး.. ပုံနှိပ်ထုတ်လိုက်တဲ့မန္တလေးကစားသောက်စရာတွေအကြောင်းမှာ.. မုန့်တီအကြောင်းသေသေချာချာပါတယ်..
မြန်မာ့စားစရာတွေမှာ ပြဿနာတခုက.. စတင်န်းဒတ်မရှိတာပါပဲ..။
အခုလို… လအော့လအယ်.. လပျော့လဗြဲအခြေအနေတွေမြင်ရလေသတည်းပေါ့…
ကိုယ်ရေးနေတဲ့.. ဇော်ဂျီဖေါင့်တောင်..စတင်းဒတ်မဟုတ်တဲ့အပြင်… ဇော်ဂျီကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးတော့.. Zawgyi တဲ့…။
အဲ…အဲ … သဂျီး​ပြောသလိုဘဲ
ဟင်းချက်​နည်းစာအုပ်​​တွေမှာလည်း အများစုက သင့်​သလိုကြည့်​ထည့်​ လို့ဆိုတာချည်းပဲ…
ကို​ပေါက်​နဲ့ကိုခ ကို​တော့ အမိဖမ်းထားပြီဗျို့ …..
ဟိုသဂျား ကိုလည်း လမ်းပြလုပ်​ခိုင်းရဦးမယ်​
မန်းလေးက နန်းကြီးသုပ်ကောင်းတယ်လို့ ကြားဖူးတာ..ဘယ့်နှယ် မုန့်တီ လဲလို့စဉ်းစားနေတာ…
အနော်က မုန့်တီဆို ရခိုင်မုန့်တီပဲ မျက်လုံးထဲမြင်တာလေ…
မန်းလေးကို သံယောဇဉ်ကြီးတဲ့ အူးဆာကို မန်းလေးသားတွေက ချစ်နေတော့မှာပဲ….
ဒါနဲ့ ရန်ကုန်သား နဲ့ မန်းလေးသူ ဇာတ်လမ်းလေးများ မရှိဝူးလားဟင်င်င်..
လုံမ​လေး နဲ့ အလက်​ဆင်း
မန်း​လေးက်ိုက ​နေလည်းခဏ​နေဖူး​တော့ သံ​ယောဇဉ်​ဖြစ်​တာပါ..
အပြင်​မှာ​သေ​သေချာချာ​ပေါင်းကြည့်​ရင်​လည်း တကယ်​ခင်​ဖို့​ကောင်းတာသိရမှာပါ ..
သဂျီး ပြောသလို စတင်းဒတ် မရှိတာ ထားပါဦးဗျာ။ တော်တော့်ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထင်ရာ
လျှောက်လုပ်ပြီး နာမည်တပ်တာတော့ လွန်တယ်။ ကျွန်တော် ဆို ပြည်ထမင်းသုတ် သွား
စားတယ်။ လာချတော့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ထမင်းသုတ်..။ ဒါဘာလဲ ဆိုတော့ ပြည်ထမင်း
သုတ်တဲ့။အမယ်.. ပြည်သားကို လာပြီး။ ဦးဆာမိ ပြောတဲ့ မောနင်းစတားမှာတော့
မြီးရှည်ပဲ စားဖြစ်တယ်။ အဲဒါတော့ နည်းနည်း စားလို့ဖြစ်တယ် ဆိုရမယ်။
ပြည်​ ​ဒေါ်ဥထမင်းသုပ်​လည်း အရင်​ပြည်​မှာတုန်းကလိုမဟုတ်​​တော့ဘူးလားလို့..
ခက်​တာက ​တွေ့ရင်​မစားပဲလည်းမ​နေနိုင်​ပြန်​ဘူး …
ဗိုက်တွေ တကယ် ဆာနေတဲ့ ညနက်သန်းခေါင် ချိန်ကျမှ
တိမီးကလည်း မန်းသူ ဟုတ်ပဲ နဲ့
မန်းကို ချစ်တယ် ဘာ လို့လည်း ဆိုတာတော့